ခဈြရဲ့နဲ့ ဝေးကွလခွေငျးဆိုတဲ့ ဇာတျလမျးတိုငျးမှာ သံသယတှေ ထားခဲ့ကွတာ မြားပါတယျ – Shinyoon
ခဈြရဲ့နဲ့ ဝေးကွလခွေငျးဆိုတဲ့ ဇာတျလမျးတိုငျးမှာ သံသယတှေ ထားခဲ့ကွတာ မြားပါတယျ
November 29, 2020 November 29, 2020 by Shin Yoon
ခဈြရဲ့နဲ့ ဝေးကွလခွေငျးဆိုတဲ့ ဇာတျလမျးတိုငျးမှာ သံသယတှေ ထားခဲ့ကွတာ မြားပါတယျ ။
တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ သလေောကျအောငျခဈြကွပမေယျ့ တဈယောကျနဲ့ ယုံကွညျရဲလောကျတဲ့ ပှငျ့လငျးမှုတှေ မရှိခဲ့ကွဘူး ။ သူ့ကို ပွောပွရငျလဲ သူစိတျညဈနရေုံပဲ ရှိမှာပေါ့ ဆိုတဲ့အတှေးတှနေဲ့ ကိုယျ့ သောကတှကေို ထိနျခနျြထားရာကနေ စတယျလေ ။ ရငျဘတျထဲအပူရှိနတေဲ့သူရဲ့ အပွုံးဟာ ဘယျလောကျပွုံးပွုံး ဘယျလိုပဲ ပွုံးပွုံးအသကျဝငျမလာတတျဘူး ပိုဆိုးတာက ကိုယျ့ရဲ့အနှီးဆုံးမှာ ရှိနတေဲ့သူက ကိုယျ့ရဲ့ခဈြသူလေ ။
အဆငျမပွမှေနျးသိပမေယျ့ ဘာအဆငျမပွမှေနျးမသိရတဲ့အဖွဈက တျောတျောကို ဆိုးပါတယျ။ အတှေးတှလေဲ အမြားကွီး ဖွဈလာတတျတယျ ။ ငါ့ကွောငျ့လားဆိုတဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ အပွဈရှာတတျတဲ့အတှေးမြိုး မခဈြတော့လို့လားဆိုတဲ့ အတှေးမြား ငါ့ကို မပွောပွနိုငျလောကျအောငျ ဘာမြားအဆငျမပွဖွေဈတာလဲဆိုတဲ့အတှေးမြိုး အမြားကွီးရှိလာတတျပါတယျ ။ အဲ့ဒီအတှေးတှနေဲ့ တဈဖကျမှာ သရေသလို တဈဖကျကလဲ ကိုယျ့မှ အဆငျမပွတော နားလညျမပေးလိုကျတာဆိုတဲ့ အတှေးတှနေဲ့ တဈဖကျမှာ သရေပါတယျ ။
တကယျဆို နှဈယောကျသား သိပျခဈြကွရဲ့သားနဲ့ မပှငျ့လငျးတဲ့ အရာကွောငျ့ နှဈဦး နှဈဖကျလုံးနာကငျြနကွေတာပါ ။ အစကတညျးကသာ ကိုယျ့သောကတှကေို ပွောပွခဲ့မယျဆိုရငျ သူက အဲ့လိုအဆငျမပွတောပဲ ဆိုတဲ့စိတျနဲ့ နားလညျပေးလို့ရသလို ကိုယျအဆငျပွရေငျပွသေလို နှဈသိမျ့ပေးလို့ရတယျ ။
တကယျခဈြရငျ ပှငျ့လငျးကွပါ . . .အပိုပွောတာမဟုတျဘူး ။ ကိုယျ့အနာသူမသိ သူ့အနာကိုယျမသိနဲ့ တဈဖကျနဲ့ တဈဖကျ သံသယတှပေဲ တိုးလာတတျကွတာမြိုးလေ ။ ခဈြလားဆိုတော့ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ သိပျခဈြကွတယျ ဒါပမေယျ့ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ မယုံကွညျရဲတော့ဘူး ဒီလိုနဲ့တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ တဖွေးဖွေး ဝေးမှနျးမသိ ဝေးသှားကွရတာလေ ။
တကယျခဈြရငျ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ပှငျ့လငျးပါ ။ ပွီးတော့ ရိုးသားပါ ။ သံသယတှရှေိရငျ နှဈဦးသားမကျြနှာခငျြးဆိုငျပွီး ရှငျးပါ အကွာကွီး မှေးမထားနဲ့ သံသယတှကေ ကွာကွာထားရငျ ပိုပွီး ကွီးထှားတတျလာတာမြိုး
လောကမှာ . . . ခဈြလကျြနဲ့ ဝေးရတဲ့အဖွဈမြိုး ကြှနျမတို့နှဈယောကျနောကျဆုံးဖွဈပါစေ ခဈြတဲ့သူတိုငျးလဲ ပေါငျးနိုငျကွပါစေ ။
ချစ်ရဲ့နဲ့ ဝေးကြလေခြင်းဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတိုင်းမှာ သံသယတွေ ထားခဲ့ကြတာ များပါတယ် ။
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် သေလောက်အောင်ချစ်ကြပေမယ့် တစ်ယောက်နဲ့ ယုံကြည်ရဲလောက်တဲ့ ပွင့်လင်းမှုတွေ မရှိခဲ့ကြဘူး ။ သူ့ကို ပြောပြရင်လဲ သူစိတ်ညစ်နေရုံပဲ ရှိမှာပေါ့ ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့ ကိုယ့် သောကတွေကို ထိန်ချန်ထားရာကနေ စတယ်လေ ။ ရင်ဘတ်ထဲအပူရှိနေတဲ့သူရဲ့ အပြုံးဟာ ဘယ်လောက်ပြုံးပြုံး ဘယ်လိုပဲ ပြုံးပြုံးအသက်ဝင်မလာတတ်ဘူး ပိုဆိုးတာက ကိုယ့်ရဲ့အနှီးဆုံးမှာ ရှိနေတဲ့သူက ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူလေ ။
အဆင်မပြေမှန်းသိပေမယ့် ဘာအဆင်မပြေမှန်းမသိရတဲ့အဖြစ်က တော်တော်ကို ဆိုးပါတယ်။ အတွေးတွေလဲ အများကြီး ဖြစ်လာတတ်တယ် ။ ငါ့ကြောင့်လားဆိုတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အပြစ်ရှာတတ်တဲ့အတွေးမျိုး မချစ်တော့လို့လားဆိုတဲ့ အတွေးများ ငါ့ကို မပြောပြနိုင်လောက်အောင် ဘာများအဆင်မပြေဖြစ်တာလဲဆိုတဲ့အတွေးမျိုး အများကြီးရှိလာတတ်ပါတယ် ။ အဲ့ဒီအတွေးတွေနဲ့ တစ်ဖက်မှာ သေရသလို တစ်ဖက်ကလဲ ကိုယ့်မှ အဆင်မပြေတာ နားလည်မပေးလိုက်တာဆိုတဲ့ အတွေးတွေနဲ့ တစ်ဖက်မှာ သေရပါတယ် ။
တကယ်ဆို နှစ်ယောက်သား သိပ်ချစ်ကြရဲ့သားနဲ့ မပွင့်လင်းတဲ့ အရာကြောင့် နှစ်ဦး နှစ်ဖက်လုံးနာကျင်နေကြတာပါ ။ အစကတည်းကသာ ကိုယ့်သောကတွေကို ပြောပြခဲ့မယ်ဆိုရင် သူက အဲ့လိုအဆင်မပြေတာပဲ ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ နားလည်ပေးလို့ရသလို ကိုယ်အဆင်ပြေရင်ပြေသလို နှစ်သိမ့်ပေးလို့ရတယ် ။
တကယ်ချစ်ရင် ပွင့်လင်းကြပါ . . .အပိုပြောတာမဟုတ်ဘူး ။ ကိုယ့်အနာသူမသိ သူ့အနာကိုယ်မသိနဲ့ တစ်ဖက်နဲ့ တစ်ဖက် သံသယတွေပဲ တိုးလာတတ်ကြတာမျိုးလေ ။ ချစ်လားဆိုတော့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် သိပ်ချစ်ကြတယ် ဒါပေမယ့် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မယုံကြည်ရဲတော့ဘူး ဒီလိုနဲ့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တဖြေးဖြေး ဝေးမှန်းမသိ ဝေးသွားကြရတာလေ ။
တကယ်ချစ်ရင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပွင့်လင်းပါ ။ ပြီးတော့ ရိုးသားပါ ။ သံသယတွေရှိရင် နှစ်ဦးသားမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီး ရှင်းပါ အကြာကြီး မွေးမထားနဲ့ သံသယတွေက ကြာကြာထားရင် ပိုပြီး ကြီးထွားတတ်လာတာမျိုး
လောကမှာ . . . ချစ်လျက်နဲ့ ဝေးရတဲ့အဖြစ်မျိုး ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်နောက်ဆုံးဖြစ်ပါစေ ချစ်တဲ့သူတိုင်းလဲ ပေါင်းနိုင်ကြပါစေ ။
ဘယျအရာကိုမှ မလိုခငျြတော့တာမဟုတျဘူး … ဘယျအရာကိုမှ မမြှျောလငျ့ရဲတော့တာပါ
အမကေို ခဈြတဲ့ သား….